Mụta otu esi azụ ahịa Crypto na Eprel 2021 | Mụọ Nduzi Azụmaahịa 2!
Mụta otu esi azụ ahịa Crypto - Mụta 2 Ultimate Guide to Trading Crypto!
2021 amalitela nke ọma maka ụlọ ọrụ crypto. Site na mmasi ohuru site na ndi a ma ama, uru nke ego dijital na-atụ anya ịrị elu n'ọdịnihu dị nso.
Nke ahụ kwuru, crypto na-aga n'ihu ịbụ otu n'ime ahịa ahịa kachasị agbanwe. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-achọ ịbanye na ya - ọ bụ ihe kachasị mkpa na ị nwere ihe ọmụma achọrọ banyere etu azụmahịa azụmaahịa si arụ ọrụ tupu iwere ya.
na nke a Muta otu esi ahia ahia Crypto, wm na-eje ije gị site na ntọala nke klaasị akụ a dijitalụ, na-atụle ọtụtụ atụmatụ dị iche iche, ma na-enye gị ihe doro anya banyere etu esi azụlite usoro azụmaahịa.
N'ịga n'ihu, anyị na-ekpuchikwa ụfọdụ ndụmọdụ banyere otu ị ga-esi chọta ezigbo onye na-ere ahịa iji bido ịzụ ahịa cryptocurrencies site na nkasi obi nke ụlọ gị.
eToro - Zụta ma tinye ego na akụ
Zụta ihe karịrị 2,400
Naanị ezigbo cryptos dị maka ndị ọrụ US
75% nke ihe ndekọ ego ndị na-ere ahịa na-efufu ego mgbe ha na-azụ ndị CFDs na onye ọrụ a. I kwesiri ịtụle ma ị ga - enwe ike ibute nnukwu nsogbu nke idafu ego gị.
Akụkụ 1: Ghọta Ntọala nke Otu esi azụ ahịa Crypto
Y’oburu na ohuru na ahia ahia ahia nke mbu, ihe mbu bu ighota uzo nke oru a. Dịka, ka anyị bido site na isi ọkpụkpụ.
Gịnị bụ Cryptocurrencies?
Might nwere ike ịmaraworị echiche nke echiche cryptocurrencies ruo n'ókè ụfọdụ. N’okwu dị mfe, cryptocurrencies bụ ego dijitalụ. Ọ bụghị ụlọ akụ etiti ma ọ bụ gọọmentị na-enye ha, ma ọ bụ na ego ọ bụla anaghị akwụ ụgwọ ha.
Ihe mkpuchi ọ bụla bụ akara aka echekwara na obere akpa dijitalụ. Ọ bụrụ na ị Bitcoin, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji mkpụrụ ego ahụ dị ka ọkara nke mgbanwe maka ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ.
A ga-echekwa azụmahịa ọ bụla n'ime akwụkwọ ndekọ aha ọha nke ọha na eze maara dị ka ngọngọ. Nke a na - emepụta ndekọ na - adịgide adịgide nke enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ mebie ya - na - eme ka cryptocurrencies bụrụ klaasị pụrụ iche n'ezie.
Ihe izizi Cryptocurrencies rutere ụwa ntị n'afọ 2009, mgbe ebidoro Bitcoin. Site na ihe ịga nke ọma Bitcoin, enwere ugbua ihe karịrị 8,000 dị adị - nke ị nwere ike ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Ugbu a anyị emeela ihe ndị bụ isi, ka anyị kwuo maka otu ị ga - esi ahia mkpuchi.
Kedu ihe bụ isi nke ahia Crypto?
Tradingzụ ahịa Cryptocurrency na-agagharị na ịkọgharị mmegharị ọnụ ahịa mkpụrụ ego dijitalụ n'ọdịnihu na ajụjụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ere Bitcoin - ị na-anwa ịkọ ma ọnụahịa mkpụrụ ego ahụ ọ ga-ebili ma ọ bụ daa n'ahịa.
Place na-etinye ịzụta ma ọ bụ ree ahịa dabere na nkọwa gị - na-enwe olileanya ị nweta uru na usoro ahụ.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ nke azụmaahịa cryptocurrency:
Ka anyị were ya na ịchọrọ ịzụ ahịa Litecoin megide USD.
A ga-egosipụta nke a dị ka LTC / USD na nyiwe azụmaahịa ị họọrọ cryptocurrency.
Ego LTC / USD ugbu a kwuru na $ 177.
Create mepụtara a ịzụta ịtụ ruru $ 500 na ụzọ.
Mgbe awa ole na ole gachara, ọnụego mgbanwe LTC / USD gbagoro gaa $ 190
Nke a sụgharịrị na mmụba ọnụahịa nke 7.3%.
Made nwetara uru $ 500 n’elu osisi gị.
Nke a bụ ihe atụ nke azụmaahịa cryptocurrency mgbe ịkọtara ọnụahịa nke akụ ga-abawanye n'oge dị mkpirikpi.
N'akụkụ tụgharịa, ị nwekwara ike ịga 'mkpụmkpụ' ma ọ bụrụ na ị tụrụ anya na ọnụahịa ga-agbadata. Nke a ga - ekwe omume site na ịre ahịa crypto CFDs. Anyị ga-abanye n'ime mkpirisi na ire ere dị mkpụmkpụ na nke a Mụta Otu esi Azụ ahịa Ntuziaka Crypto.
Na ichikota, ahia crypto na enye gi ohere irite uru nke abuo na ụdị ọnụahịa dị ala nke akụ - nyere gị ịkọ ahịa n'ụzọ ziri ezi.
N’ọtụtụ ụzọ, azụmaahịa cryptocurrency na-adọta ọtụtụ myirịta na azụmaahịa Forex. Na ahia abụọ a, ị na - eche ịkọ ọnụego mgbanwe ego abụọ. Na mgbakwunye, akụ abụọ ahụ amakarịkwara maka enweghị ike ha - opekata mpe n'ihe gbasara exotics.
N'ezie, dị ka Forex, ọnụahịa nke cryptocurrencies na-agbanwe kwa sekọnd ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ n ’ị na-eche ịre ahịa cryptocurrency, ọ ga-adị mkpa ka ị ghọta ihe na-akpata ngagharị ọnụahịa a na ebe o nwere ike ịbụ isi ya n’ọdịnihu.
Dị ka ndị dị otú a, tupu ịme ahịa ọ bụla, ịkwesịrị ime ihe omume ụlọ akwụkwọ gị na ego dijitalụ dị mkpa na ahịa ya.
Ptozọ ahia ahia Crypto
Na ụwa nke cryptocurrency, ụzọ abụọ azụmaahịa bụ akụ nwere ike gbanwere ibe ha. Enwere ike ịkekọrịta nke a n'ọtụtụ abụọ - ụdị azụmaahịa crypto-cross na ụzọ abụọ crypto-fiat.
Ka anyị lerukwuo ụdị ụdị azụmaahịa ọ bụla anya.
Cryptocurrency Cross-ụzọ abụọ
Cryzọ abụọ Crypto-cross gụnyere ego dijitalụ abụọ dị iche iche gbanwere megide ibe ha.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị hụ ụzọ ahịa BTC / XLM - nke a pụtara na BTC (Bitcoin) bụ ego isi, na XLM (Stellar) bụ ego ọnụego.
Ọ bụrụ na ị na-ere BTC / XLM, nke a bụ otu azụmahịa ahụ ga - esi rụọ ọrụ:
Ka anyi kwuo na uzo BTC / XLM nke crypto-cross di onu ahia na 110,023.
Nke a pụtara na maka Bitcoin ọ bụla ị na-azụ ahịa, ị ga-enweta 110,023 uru nke Stellar na nloghachi.
Ọrụ gị dị ka onye ahịa bụ ịkọ nkọ ma ọnụego mgbanwe a nke ụzọ crypto-cross ga-ebili ma ọ bụ daa.
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro a nwere ike bụrụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya maka ndị ahịa - ọkachasị ndị mbido. Ọ na-achọ ka ị nweta ihe ọmụma siri ike nke ma cryptocurrencies na ụzọ azụmaahịa na ahịa ha.
N'ihi ya, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa novice na-ahọrọ ire ahịa cryptocurrency megide ego a maara nke ọma nke gọọmentị nyere - dị ka dollar US ma ọ bụ euro.
Nke a na-ewetara anyị ụdị ụzọ nke abụọ azụmaahịa cryptocurrency.
Zọ abụọ Fiat-na-Cryptocurrency
Dịka anyị kwuru n'elu, ego fiat-to-crypto mejupụtara ego fiat na ego dijitalụ.
Mgbe ị hụrụ ụzọ ahia BTC / USD ma ọ bụ BTC / EUR, ọ na-egosi ọnụahịa nke cryptocurrency na ego fiat kwekọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa BTC / USD dị na $ 40,000 - ọ pụtara na otu Bitcoin bara uru $ 40,000 na dollar US.
A na-azụkarị cryptocurrencies na dollar US, ebe ọ bụ ego ego ụwa. Agbanyeghị, dabere na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị, ị nwekwara ike ịzụ ahịa ego dijitalụ megide ego ndị ọzọ fiat dị ka pound Britain, euro, yen yen Japanese, dollar Australia, na ndị ọzọ.
Nke a bụ ihe atụ nke ahia fiat-to-cryptocurrency.
Ga-ahụ ụzọ akpọpụtara dịka LTC / USD na nyiwe azụmaahịa gị.
A na-ekwu ọnụahịa LTC / USD na $ 180.
Ikwere na ụzọ abụọ ahụ abaghị uru - ị na-etinye usoro ịzụta ihe ruru $ 2,000.
Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, LTC / USD bụ ihe dị mkpa na $ 210.
Nke a pụtara na ọnụ ahịa ụzọ abụọ ejirila 16.66% gbagoo.
Dị ka ndị dị otú a, ị na-etinye ahịa maka ire ere na uru gị.
Na ahia a, ị laghachiri $ 2,332 - yana $ 332 dị ka uru gị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ cryptocurrencies niile dị n'ahịa taa nwere ike gbanwere ego ndị ọzọ.
Isi ihe ọzọ iburu n’uche bụ na a na-azụrịrị ego abụọ abụọ na ego di iche iche site na CFD (Nkwekọrịta maka Esemokwu). N'okwu dị mfe, mgbe ị na-eji CFDs, ị gaghị enweta akụrụngwa ozugbo. Kama nke ahụ, ị ​​ga-azụta ngwa ọrụ ego nke ahụ tracks ọnụahịa nke ụwa nke crypto-asset.
Isi uru nke ịzụ ahịa CFDs bụ ịnweta ọrụ efu na ịgbasa gbasaa. Ọzọkwa, ị ga - enwe nhọrọ iji tinye ihe mgbakwunye na azụmaahịa gị, yana ire ere dị mkpụmkpụ.
Etu esi ahia ahia: Obere oge ma obu ogologo oge?
Mgbe ị mụtara otu esi azụ ahịa crypto na nke mbụ, ị ga-atụlerịrị ebumnuche ego gị. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ itinye ego na crypto ruo ọtụtụ afọ, ma ọ bụ zụọ ahịa site na ịzụ ahịa ụbọchị / ịzụ ahịa ụbọchị?
Ka anyị tụlee ihe nhọrọ nke ọ bụla na-agụnye na ụdị akụnụba ego dị iji kwado nke a.
Zọ kachasị ewu ewu iji banye na mkpụmkpụ mkpụmkpụ cryptocurrency sitere na CFDs. Dịka anyị kwuburu na mbụ, ndị CFD na-enye gị ohere ịzụ ahịa cryptocurrencies na-enweghị ịnweta akụ dị n'okpuru.
N'aka ozo, ikwesighi ichegbu onwe gi na idebe nkpuru ego gi na obere akpa dijitalụ ma obu nchekwa nke ego dijitalụ gi. A CFD ga-elele ọnụahịa nke cryptocurrency ma nye gị ohere ị ga-erite uru site na ịdaba na ahịa na-arị elu.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị kwenyere na ọnụahịa nke ihe mkpuchi na-achọ ịrị elu, ịnwere ike ịnọ n'ọnọdụ dị ogologo ma debe usoro ịzụta. Ozugbo ọnụahịa rịrị elu, ị ga-emepụta ire ere iji nwepụta ego - na-enweta uru na ntụgharị.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na i chere na uru nke cryptocurrency ga - ada - ị nwere ike ịga mkpụmkpụ site na ibido ụzọ ire ere. Ọ bụrụ na ịkọ nkọ bụ eziokwu, ị ga-etinye Buy iji ego si na otú, atụgharị a uru.
Ka anyi gosiputa otu crypto CFD si aru oru n’ime ihe omuma atu:
Ọnụahịa nke DASH / USD bara uru na $ 120.
Nke a pụtara na a DASH CFD ga-akwụ ụgwọ na $ 120.
Ọ bụrụ na ị chepụta na ọnụahịa nke DASH ga-ada - ị ga-emepụta usoro ire ere.
Ọ bụrụ na ị chepụta na ọnụahịa nke DASH na-achọ ịrị elu - ị ga-emepụta usoro ịzụta.
Ọ bụrụ na ọnụahịa nke DASH na-agagharị na ntụziaka ị buru amụma ya, ị ga-enweta uru.
Obere oge ndị ahịa CFD dị mkpụmkpụ na-emeghe ọnọdụ ha maka ihe karịrị ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu. Nke a bụ n'ihi na ngwaahịa CFD na-akwụ ụgwọ na-esonyekwa ego ego abalị.
Pụtara - maka abalị ọ bụla ị na-emeghe ọnọdụ crypto CFD gị, ị ga-akwụ ụgwọ ego n'aka onye na-ere ahịa gị. Ego ole ị ga-akwụ ụgwọ dabere na ikpo okwu ị họọrọ na ego ole ị tinyere na ahia ahụ.
Zụrụ ma jide Crypto
N'ihe banyere atụmatụ dị ogologo oge, ị ga-etinye ego na cryptocurrencies kama ịzụ ha. A na-akpọkarị nke a 'ịzụta ma jide' atụmatụ, nke a maara dị ka HODLing n'etiti ndị na-etinye ego na crypto.
N'okwu dị mfe, nke a pụtara na ị ga-azụta cryptocurrencies ma jide ha ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ afọ - rue oge ruru iji ree mkpụrụ ego maka uru.
Ọ bụrụ na ị ga - achọ ịga maka atụmatụ ogologo oge, ọ ga - aka gị mma ịzụta gị cryptocurrency si a tụkwasịrị obi online ore. Iji chekwaa gị oge ụfọdụ, anyị na-atụ aro ka ị tụlee eToro - usoro ịzụ ahịa mmekọrịta nke FCA, CySEC, na ASIC na-achịkwa.
Site na ndị ahịa karịrị nde 17, eToro wuru aha dị ogologo na ntanetị ahịa n'ịntanetị. A na-ejikọkwa ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ikpo okwu na obere akpa mkpuchi - ka ị nwee ike ijikwa itinye ego gị niile site na ntanetị. Nke kachasị mkpa, eToro na-enye gị ohere itinye ego na azụmaahịa cryptocurrencies 100% enweghị ụgwọ ọrụ.
Dịka ị nwere ike ịkọ, atụmatụ ịzụta na ijide bụ ihe na-amasị ndị na-achọghị ichegbu onwe ha na obere oge ahịa ahịa. Ọ na - azọpụta gị ịme nyocha na nyocha nyocha iji chọta ohere ịzụ ahịa ziri ezi.
Maka nke a, ndị na-azụ ahịa novice na-ahọrọkarị ịzụ ahịa cryptocurrency site na iji atụmatụ ogologo oge. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ isi n’ụzọ a, eToro na - enye gị ohere ịbanye na 16 cryptocurrencies na karịa 90+ azụmaahịa abụọ iji wuo pọtụfoliyo dị iche.
Akụkụ 2: Mụta Iwu Crypto
Ndị na-ere ahịa Cryptocurrency na-ejikwa nnukwu volatility na leverage. Dika odi, odi nkpa ijikwa ahia gi. Nke a ga-ekwe omume site na itinye usoro ziri ezi nke iwu azụmaahịa.
Maka ndị na-amaghị, azụmaahịa na-enye gị ohere ka gị na onye na-ere ahịa gị kwukọrịta. N'okwu dị mfe, usoro ịzụ ahịa na-ezigara onye na-ere ahia gị otu ị chọrọ ịbanye n'ahịa, ego ole ịchọrọ ịkụ, yana otu ịchọrọ isi wepu ahia ahụ.
N'akụkụ a nke Mụta Otu esi Azụmaahịa Crypto Guide, anyị na-ejegharị gị site na iwu kachasị baa uru ị ga-achọ iji nweta.
Zụrụ iwu ma ree iwu
Anyị ga-amalite site n'ụdị usoro kachasị mkpa - ịzụta ma ree iwu. Iwu ndị a dị mkpa maka ụdị azụmaahịa niile - n'agbanyeghị agbanyeghị ego.
Na ụdị nke kachasị, ọ bụrụ na ị na-atụ anya na ọnụahịa nke cryptocurrency na-achọ ịrị elu, ị ga-abanye ahịa na a ịzụta nye iwu ma wepu ya na a ere iwu.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ị kwenyere na ọnụahịa nke ihe onwunwe dijitalụ na-aga maka ọdịda ala - ị ga-abanye na ya ere nye iwu ma wepu ahia na a ịzụta iwu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ị ​​ga-eji ma zụta ma ree ahịa maka azụmaahịa ọ bụla. Ga-emeghe a ọnọdụ na otu iji, na ị ga-emechi ahia na-abụghị iji.
Iwu ahịa na oke iwu
Na ahịa cryptocurrency na-agba ọsọ ọsọ, ọnụahịa nke mkpụrụ ego dijitalụ na-agbanwe n'otu sekọnd ọ bụla. Maka nke a, ọ dị oke mkpa na inwere usoro ntinye maka iwu azụmaahịa gị niile.
Usoro ntinye abụọ a na-ejikarị na azụmaahịa crypto bụ iwu ahịa na njedebe iwu. A na-eji iwu ndị a ezipụta na onye na-ere ahịa ihe ọnụahịa ntinye ịchọrọ ịchọrọ na ahia.
Ka anyị kọwakwuo.
Usoro ahịa ga-agwa onye na-ere ahia ka o mezue iwu ahụ ozugbo. Ọ pụtara na onye na-ere ahia ga-eme iwu ahụ na ọnụahịa kacha mma. Useddị usoro a ka a na-eji eme ihe ngwa ngwa mgbe ị hụrụ ohere ịzụ ahịa bara uru.
Nke ahụ kwuru, ọ dị mkpa iburu n'uche na enwere ike ghara igbu ahịa ahịa n'ahịa azụmaahịa ikpeazụ. Dika ahia ahia ahia di oke nma, onu ahia nke enyere iwu a nwere ike idi iche na onu ahia enyere.
Dị ka ọmụmaatụ,
Ka anyị tụlee na ọnụahịa Cardano dị ugbu a na $ 0.9003.
Ọnụahịa a na-amasị gị, n'ihi ya, ịchọrọ itinye azụmaahịa ozugbo.
Yabụ, ị debere 'usoro ahịa', na-egosi na onye na-ere ahịa kwesịrị ime iwu gị ozugbo.
N'otu oge, ọ na-gburu, ị na-a lee anya na iji.
Nwere ike chọpụta na kama $ 0.9003, ị banyere ahịa na $ 0.9005.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọdịiche ahụ ga-adị obere ma ọ gaghị emetụta ike gị ịme uru. Ihe dị iche a na-adịkarị na iwu ahịa dịka ọnụahịa crypto na-agbanwe mgbe niile.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbanye azụmaahịa na ọnụahịa a kapịrị ọnụ, ọ bụ ebe ahụ ka usoro ịgba ga-abata.
Usoro njedebe na-enye gị ohere ịzụta na ire cryptocurrencies na ọnụahịa ụfọdụ. Ka anyi lee ka iwu oke ga esi aru oru na ihe omuma anyi mbu nke Cardano.
Were ya na Cardano dị ọnụahịa ugbu a na $ 0.9003.
Chọrọ itinye iwu ịzụta, mana ọ bụ naanị mgbe ọnụahịa Cardano mụbara ruo $ 0.9015.
Dị ka otu a - ị na-etinye a ikpebi oke na $ 0.9015.
N'okwu a, onye na-ere ahia gị ga-eme iwu gị ma ọ bụrụ na ọnụahịa nke Cardano na-ebili na $ 0.9015. Ọ bụrụ na ọ bụghị, iwu ahụ ga-adịgide ruo mgbe ị ga-akagbu ya n'onwe gị.
Iwu nkwụsị-nkwụsị na iwu ego were
Tinyere usoro ntinye, ị ga-achọkwa usoro dị ike iji mechie azụmahịa gị crypto. Zọ bụ isi isi mee nke a bụ site na nkwụsị 'nkwụsị' na 'nweta uru'.
Usoro nkwụsị na-efu bụ otu n'ime iwu kachasị baa uru mgbe ị na-azụ ahịa cryptocurrency. Ọ ga - enyere gị aka imebi ọghọm ahụ site na ịbelata ọghọm. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike ikpebi ego ị chọrọ ịpụ na azụmaahịa - ọ bụrụ na ahịa crypto agabiga amụma gị.
Ka anyị jiri ihe atụ kpochapụ alụlụ ahụ.
Wantchọrọ itinye iwu ịzụta na LTC na $ 185.
Agbanyeghị, ịchọrọ izere ihe egwu nke ịnwe ihe karịrị 2% na ahia gị.
Ya mere, ịtọziri usoro nkwụsị-nkwụsị na 2% n'okpuru ọnụahịa ntinye - na $ 181.30.
N'aka ozo, oburu na ichoro ire ere, i gha edobe iwu nkwụsị na 2% kari onu ahia - na $ 188.70.
Ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ anaghị aga dịka nkwupụta gị, onye na-ere ahịa gị ga-emechi azụmaahịa ahụ ozugbo na nkwụsị nkwụsị ị kwuru - gbochie ọghọm ọ bụla karịrị akara ọnụahịa 2% ị setịpụrụ.
Iji iwu nkwụsị na-efu bụ otu ụzọ iji gbanye ahia gị, yabụ na ị gaghị ejikwa aka gị na-taabụ na ahịa n'oge niile ị na-emeghe ọnọdụ.
Ugbu a na ịmara otu esi abanye n'ahịa na otu ị ga-esi belata oke mfu gị, naanị ihe fọdụrụ ịkọwa bụ otu ị si achịkwa uru gị. N’ụzọ dị oke mkpa, ọ dị mkpa ka ị banye na ahịa cryptocurrency na otu ego ị chọrọ ịme.
A na-ewere uru iji gosipụta na onye na-ere ahia gị ihe uru gị bara uru. Nke a ga - eme ka onye na - ere ahịa ahia mechie ahia na akpaghị aka ozugbo ọ ruru ọkwa a kapịrị ọnụ.
Iji kọwaa nke ọma:
Ka e were ya na ị tinyere iwu ịzụta na LTC na-atụ anya ka ọnụahịa ego dijitalụ ga-arị elu.
Ọnụahịa LTC ugbu a bụ $ 185.
Tochọrọ inweta uru nke 5% - yabụ ịtọziri uru-uru na $ 194.25.
Ọ bụrụ na ọnụahịa nke LTC bilitere na $ 194.25, onye na-ere ahịa gị ga-eme ngwa ngwa nweta ego gị wee ree ọnọdụ ahụ - na-ekpochi uru 5% gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịnwere ike itinye iwu nkwụsị na nkwụnye ego na n'akụkụ ọ bụla nke ọnụahịa ntinye gị. Ọ baghị uru n ’ụzọ ọ na - eme, ọnụ ahịa gị ga - emechi ngwa ahịa gị na - akpaghị aka - na ọnụego i kwuru.
Nkebi nke 3: Mụta Crypto Risk-Management
Njikwa ihe egwu bu ihe di nkpa mgbe imuta uzo ahia crypto. Dị ka ahịa ọ bụla ọzọ, ọ gaghị ekwe omume izere ihe ize ndụ n'ozuzu ya. Emechakwa, iji kpata ego, ịkwesịrị itinye ego gị n'ihe egwu.
Nke ahụ kwuru, ọ ga-ekwe omume ịmegharị ihe na ịbelata oke mfu gị. N'akụkụ, ị kwesịrị ị na-atụle ihe osisi ị nwere ike imeli itinye ego na azụmaahịa ọ bụla crypto.
Na ahia jargon, a na-akpọ nlekọta ndị ahụ dị ka 'atụmatụ njikwa ihe egwu'. Ndị a gụnyere usoro mgbochi ị setịpụrụ iji kpuchido ọdịmma gị na isi ahịa gị.
N'ebe a, anyị na-atụle ọtụtụ usoro njikwa ihe egwu dị mkpa iburu n'uche mgbe ị mụtara otu esi azụ ahịa crypto na nke mbụ.
Njikwa Bankrollroll nke Pasent Dabere
Usoro njikwa bankroll bụ echiche na-akpata azụmaahịa ọ bụla. N'okwu dị mfe, ọ na-akọwa oke osisi ị dị njikere itinye n'ihe ize ndụ na otu ahia. Ndị ahịa na-akọwakarị njikwa bankroll ha na usoro nke percentages.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịtọ oke na ọnọdụ gị niile na 2%. Nke a pụtara na ị gaghị etinye ihe karịrị 2% nke ego azụmaahịa gị dị na otu ahia cryptocurrency. N'agbanyeghị otu esi ekwe nkwa ahịa ahụ, ị ​​ga-arapara na 2% a.
N'akuku ahia gi, isi ahia gi gha agbanwe. N'ihi ya, ị ga-agụgharị njikwa ego bankroll gị n'ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda gị.
Tụlee ihe atụ a:
Ka anyị kwuo na ị nwere $ 5,000 na akaụntụ azụmaahịa gị.
I kpebiri itinye ihe karịrị 2% nke ngụkọta ego gị.
Ka o siri dị, ego kachasị ị nwere ike itinye na azụmaahịa cryptocurrency bụ $ 100.
Ka e were ya, ka ị gachara izu ole na ole, i nwere $ 7,500 ugbu a na akaụntụ gị.
N'aka nke ya, ị nwere ike ugbu a tinye ihe ruru $ 150 - nke bụ 2% nke $ 7,500.
Ọ bụrụ na ego azụmaahịa gị gbadara ruo $ 3,000, dị ka atụmatụ njikwa bankroll gị ugbu a, ị nwere ike itinye naanị $ 60 - were gabazie.
Trapto Crypto site na Onodu Egwu na Regwọ Ọrụ
Zọ ọzọ iji chịkwaa azụmaahịa gị cryptocurrency bụ ịnabata usoro dabere na njikwa ụgwọ ọrụ ihe egwu.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ị na-atụle ego ị chọrọ ịchụ na ego ole ị nwere ike itinye ma ị dị njikere iburu iji nweta ihe a.
Kwuo na ị nwere ụgwọ ọrụ-ụgwọ ọrụ nke 1: 1.5
Pụtara - maka $ 1 ọ bụla ị dị njikere itinye ihe egwu, ị na-atụ anya ị nweta uru nke $ 1.5.
N'aka ozo, oburu na inara $ 100, ichoro irite $ 150.
Dịka ị pụrụ ịhụ, echiche a dị mfe, na-eme ka atụmatụ a dabara adaba maka ndị mbido na ndị ọkachamara nwere oge. Nwere ike jiri atụmatụ ụgwọ ọrụ ụgwọ ihe egwu a site na iji iwu na-akwụ ụgwọ na ịkwụsị ọnwụ nke anyị kpọtụrụ aha n'elu.
Maka ndị ọhụrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa - itinye ego na-enyere gị aka azụmaahịa na ego karịa nke ị nwere. Will ga - etinye ihe ị nwere ike imere ma buruzie nke fọdụrụ dị ka mbinye ego onye ahia gi.
Dịka ị nwere ike ịkọ, itinye ego na enye gị ohere ibuli uru gị bara ụba. Nke ahụ kwuru, rịba ama na ọ nwekwara ike ịkọbawanye mfu gị.
Legodị ihe atụ a:
I nwere $ 2,000 na akaụntụ ahia gị, ma ịchọrọ itinye ya na BTC / USD
Gị ore-enye gị leverage nke 1: 20 - nke pụtara na ị nwere ike ịkwalite osisi gị 20.
Apply na-etinye ihe ngosi nke 1: 20, ma ugbu a, ọnọdụ gị bara uru na $ 40,000.
Ọ bụrụ n’itinye leverage nke 1:10, a ga-atụle ọnọdụ gị na $ 20,000.
Ego ole ị nwere ike ịnweta ga-adabere n'ọtụtụ ihe. Otu ihe ịchọrọ bụ na a na-ahụta ịzụ ahịa na itinye ego n'ihe egwu dị n'ọtụtụ akụkụ ụwa - ma si etu a na-achịkwa nke ọma.
Dịka ọmụmaatụ, a naghị ekwe ka ndị bi na United States zụọ ahịa CFD ma ọ bụ jiri ikike itinye ego. N'aka nke ọzọ, na UK, ị nwere ike itinye ihe leverage na akụ CFD niile, belụsọ crypto.
N’ụzọ dị iche, ụfọdụ mba ụwa enweghị oke ikike ịmụrụ ihe. Will gaghị eju gị anya ịhụ leverage a na-enye dị elu dị ka 1: 1000 na ụfọdụ nyiwe. Agbanyeghị, dịka anyị kwuburu na mbụ, mgbe itinye ụdị ikike itinye nnukwu ego n'ọrụ - ị na-akpọkwa ihe egwu na-enweghị isi.
Ka anyị gosi gị ihe atụ nke otu leverage nwere ike imetụta azụmaahịa:
Wantchọrọ itinye usoro ịzụta 100 $ na NEO, nke ọnụahịa ya bụ $ 35 kwa mkpụrụ ego.
Kpebiri itinye ntinye nke 1: 5 - nke pụtara, ọnụ ahịa gị niile bara uru ugbu a na $ 1,000.
Mgbe awa ole na ole gasịrị, ọnụahịa nke NEO na-ebili site na 2%
Na-enweghị leverage - uru gị na azụmaahịa a ga-abụ $ 2.
Ebe ọ bụ na i tinyere leverage nke 1: 5 - uru gị na-abawanye na $ 10.
Dị ka o doro anya, itinye ego bụ ụzọ dị mfe iji bulie uru gị. N'otu oge ahụ, cheta na ọ bụrụ na ọnụahịa NEO gbadara, ọghọm gị ga-abawanye.
Akụkụ 4: Mụta otu esi enyocha ọnụahịa Crypto
Dịka ị bịarutere ugbu a, ị kwesịrị ị mata ugbu a ihe ahịa azụmaahịa cryptocurrency gụnyere, ụdị iwu iji, yana otu esi ejikwa ihe egwu ndị ahụ.
Iji nweta mmalite kachasị mma na azụmaahịa crypto, ịkwesịrị ịdabere na data siri ike. Ndị ahịa na-eji ọtụtụ ụzọ iji ghọta ihe ndị na-emetụta ọnụ ahịa crypto.
N'akụkụ a, anyị na-atụle otu ị ga-esi nyochaa ọnụahịa crypto iji mee mkpebi azụmaahịa ziri ezi.
Nnyocha nke isi na Crypto
Nchịkọta isi na-enyocha akụkụ akụ na ụba na nke akụ na ụba na-enyere aka na volatility nke cryptocurrency. Ofdị nyocha a dị mkpa iji mee ka emelitere gị na mmepe ọhụụ na ụwa nke akụ dijitalụ.
Dị ka akụ dị ọhụrụ, netwọkụ cryptocurrency na-arụ obere ọrụ karịa akụ ọdịnala. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-enyocha ahịa crypto, ị ga-atụle ọganihu blockchain na ihe ize ndụ nchebe. Ihe ndị a anaghị emetụta na nchekwa nchekwa dị ka ahịa na ngwaahịa.
Nke a bụ ndepụta nke ihe ịkwesịrị ịchọ maka mgbe ị na-enyocha ebe a na-azụ ahịa crypto:
Isi ahia nke mkpụrụ ego ọ bụla
Ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ego dị
Nkà ihe ọmụma dị n'azụ mkpụrụ ego ahụ
Liquidity na ahia olu
Ọnọdụ akụ na ụba na ojiji nke cryptocurrencies
Iwu zuru ụwa ọnụ na nke obodo
Ka ị na-enyochakwu, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị chere dị mkpa na ọnụahịa cryptocurrency.
Iji maa atụ, na Jenụwarị 2021, ọnụego Bitcoin gbagoro 14% mgbe Elon Musk gosipụtara ego dijitalụ na profaịlụ ya. Dika odi otua, o ghaghi adi anya iche na 'mgbasa ozi banyere ndi mmadu' abughi ihe di nkpa nke n'enye aka na onu ahia nke cryptocurrencies.
N'ezie, ọ nwere ike ịdị ka ndepụta na-akụda mmụọ iji nyochaa. Ekele ịntanetị, ugbu a ị nwere ike ịdenye aha na ọrụ na-ewepụta ozi oge na mmelite dị mkpa maka cryptocurrencies. Zọ a, na-adịghị chọrọ ka itinye ego oge gị niile na-enyocha ahịa.
Nyocha Nka na ụzụ na Crypto
Nyocha teknụzụ, n'aka nke ọzọ, chọrọ ka ị nyochaa ọnọdụ nke ahịa cryptocurrency site na ilele akụkọ ihe mere eme nke akụ dijitalụ. Will ga-eji chaatị na teknụzụ gosipụta echiche ahịa nke otu ụzọ abụọ crypto.
E nwere ọtụtụ ihe ntanetị dị iche iche dị na ahịa taa - dị ka Ngosipụta Na-agagharị, ihe ngosi MACD, Ntọala Ntuziaka Nkezi, na Index Ike Ike - n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị ị họọrọ ga-adabere na atụmatụ azụmaahịa gị na ebumnuche ego.
Maka onye ahịa ọhụụ, ịdebe usoro nyocha na nke nyocha nwere ike ịbụ nnukwu. Nke ahụ bụ ebe mgbaàmà crypto nwere ike ịbịakwute onye enyemaka gị.
Ihe ngosi ahia nke Crypto bu ihe na-adabere na akara aka dika akara nke ihe ngosiputa oru. Ha na-ebipu mkpa ọ dị gị iji mee nyocha na ahịa ma baara onwe gị uru.
Kama nke ahụ, akara ngosi azụmaahịa gụnyere ndụmọdụ dịka:
Ma ị kwesịrị idowe a Buy ma ọ bụ na-ere iji
Ọ bụrụ na ịnweghị oge zuru ezu iji nọrọ na nyocha, ndị a mgbaàmà crypto na Mụọ 2 Azụmahịa nwere ike ịzọpụta ndụ.
Akụkụ 5: Mụta otu esi ahọrọ Crypto Broker
A na-emekarị ahịa Cryptocurrency n'ịntanetị. Iji zụọ ahịa crypto site na nkasi obi nke ụlọ gị, ị ga-ebu ụzọ chọta onye na-atụkwasị obi. Dị ka ị maara ugbu a, onye na-ere ahịa gị na-eme ahịa ahịa gị niile maka gị. Ya mere, odi nkpa ka ichota ihe kwesiri ka ijiri ahia gi.
Anyị ejirila ndepụta nke ihe ndị dị mkpa ịchọrọ ịtụle mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa crypto na ntanetị.
Bestzọ kachasị mma iji hụ na onye na-ere ahịa bụ ntụkwasị obi bụ ịlele ma ha nwere ikikere site na ikike ikike ego. Bodieslọ ndị na-achịkwa ebe a na-azụ ahịa na-achịkwa nke na-eme ka ndị na-ere ahịa na-agbaso ụkpụrụ nduzi siri ike - iji chebe mmasị ndị ahịa.
Dịka ọmụmaatụ, achọrọ ndị na-ere ahịa na-achịkwa ka ha debe ego ndị ahịa na akaụntụ akụ iche iche ma dozie nyocha oge niile. Ndi usoro iwu a kacha mara amara bu ASIC na Australia, FINRA na US, FCA na UK, CySEC na Cyprus, na MAS na Singapore.
Ihe mbu na ndenye aha gi bu inyocha na onye ahia gi ahoro nwere ikikere n’aka opekata mpe otu n’ime ndi ikike a.
Ego ahia na isslọrụ
Iji kwado ọrụ gị, ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ụgwọ. Nke a bụ nkọwa nke ụdị ụgwọ dị iche iche ị ga-ahụ.
Isslọrụ bụ ụgwọ ọnụego gbakọtara dịka pasent nke azụmaahịa gị. Kwuo, dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa gị na-ekwupụta ọrụ 1.2% na azụmaahịa mkpuchi. Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ 1.2% mgbe ị banyere ahịa na otu ugboro ọzọ mgbe ị na-apụ ya.
Ma ịghara ichegbu onwe gị, enwere ọtụtụ ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị na-enye gị ohere ịzụ ahịa na-enweghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla. Otu ụdị ikpo okwu a ma ama bụ eToro, ebe ị nwere ike ịzụ ahịa 16 cryptocurrencies na ntọala ọrụ efu.
Gbasa bụ ego na-apụtachaghị adaba na nke ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti ịrịọ na ọnụ ahịa ego nke otu ụzọ abụọ crypto. N'adịghị ka ọrụ, ọ bụghị ego a kapịrị ọnụ mana ọ ga-adịgasị iche dabere na ọnụahịa nke ego ahụ.
Ka anyị kwuo ọnụahịa ịzụta nke EOS / USD bụ $ 4.3000, na ire ere bụ $ 4.3002. Nke a sụgharịrị ka ọ gbasaa 2 PIPS.
Ọ bụrụ na itinye ahia na EOS, ọ pụtara na ị na-amalite ahia gị na ọnwụ nke 2 pips. Ikwesiri inweta ihe kariri 2 pips maka ahia a nke crypto iji nweta uru obula. N'ihi ya, ị na-achọ mgbasa siri ike n'aka onye na-ere ahịa gị.
Dingzụ ahịa chọrọ ka ị nyefee nnukwu ego maka onye na-ere ahịa gị. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịtụle ihe nkwụnye ego na nhọrọ nkwụsị na-adị n'elu ikpo okwu.
Ndị ahịa kachasị mma na ịntanetị ga-enwe nhọrọ ole na ole maka gị. Ndị a ga-agụnye nnyefe ụlọ akụ, kaadị akwụmụgwọ / debit, yana e-wallets ndị ọzọ dị ka Paypal.
Broka kacha mma ahia ahia na ntanetị
Ọbụna na ndepụta nyocha, anyị maara na ịchọta ezigbo onye na-ere ahịa na ntanetị nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji were onwe anyị ịchọta ebe kachasị mma maka ịzụ ahịa ahịa nke 2021.
Ndị a bụ ndị ahịa ise kachasị mma na-apụ na njirisi anyị niile.
1. eToro - N'ozuzu Best Crypto Broker na 2021
Ma ị bụrụ onye mbido ma ọ bụ onye ọkachamara, eToro bụ usoro nghọta na - enweghị nghọta nke ga - emegharị maka azụmaahịa gị chọrọ. Iji malite, ndị na-ere ahịa na-enweta ikikere site n'aka otu usoro ọchịchị atọ - FCA, CySEC na ASIC.
Dika anyi kwuburu na mbu, inwere ike inweta uzo ahia ahia ahia 90 n’ime eToro. Ọzọkwa, ikpo okwu a nwekwara ọtụtụ puku nchekwa ego ndị ọzọ edepụtara - gụnyere ihe karịrị 50 forex abụọ na ebuka sitere na mgbanwe mba 17 dị iche iche.
Ikekwe, nke kachasị mkpa, eToro na-eme ka ịzụ ahịa nke akụ niile na-akwado ọrụ efu na ịgbasa asọmpi. Ndị ahịa ọhụụ nwekwara ike irite uru na akaụntụ ngosi ego n'efu, yana Detuo Trader atụmatụ iji mụta otu esi azụ ahịa crypto. Iji malite n'elu ikpo okwu, ihe niile ị chọrọ bụ nkwụnye ego kacha nta nke $ 200, ma ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa na $ 25.
A na-enye ọtụtụ ahịa
Commissionzụ ahịa ọrụ Zero
Ọ dị mma maka ndị mbido na ntinye aka dị mfe
0.5% ego ntụgharị ma ọ bụrụ na itinyeghị na USD
2. EightCap - Kacha mma Commission-Free CFD Broker
Ndị na-akwado iji nyocha teknụzụ maka azụmaahịa cryptocurrency ga-adabere n'akụkụ EightCap. Ikpo okwu dakọtara nke ọma na MT4 na MT5 na-ere ahịa na-ewu ewu - ma na-abịa na chaatị, ihe ngosi na ihe ndị ọzọ.
EICCap na-achịkwa 40 ma nye gị ohere ịnweta ọtụtụ akụrụngwa ego. Na-achọ ihe karịrị XNUMX ụzọ abụọ, ngwa ahịa, ebuka, ndeksi, na n’ezie - crypto.
E nwere ụdị azụmaahịa abụọ dị iche iche ị nwere ike imeghe na asatọ. Akaụntụ Standard na-abịa na-enweghị ọrụ ọ bụla wee gbasaa malite na 1 pip. N'aka nke ọzọ, akaụntụ Raw ga-achọ ka ị kwụọ ụgwọ ọ bụla n'ihe gbasara mgbasa ma ọrụ $ 3.50. N'ihe banyere nkwụnye ego kacha nta, ị ga-ebufe $ 100 iji bido na EightCap.
3. Capital.com - Commissiongbasa Kọmịshọn Na-asọmpi na Mpi na Crypto
Capital.com jeere ndị ahịa mba ofesi site na mba 200 nwere ikikere site na FCA na CySEC. A maara nke ọma ikpo okwu maka ịnweta ya na CFDs - nke na-agbatị na cryptocurrencies na akụ ọdịnala ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịzụ ahịa crypto na ntọala enweghị ọrụ. Ndị mbido na-ahọrọ isi obodo.com maka ihe omumu ya. Ọbụna ha nwere ngwa agụmakwụkwọ a raara nye aha 'InvestMate' maka ndị ahịa novice. Nwere ike ịmụta otu esi azụ ahịa crypto site na enyemaka nke ọtụtụ nkuzi banyere njikwa ihe egwu na atụmatụ azụmaahịa.
The brokerage na-emekwa ka ọ dịrị gị mfe ịmalite ahia na-enweghị ihe ize ndụ ọ bụla nnukwu ego. Nkwụnye ego pere mpe bụ naanị $ 20 iji bido mbọ ahịa gị.
Ndị FCA na CySEC na-achịkwa ya
Enweghị ọdịnala ọdịnala
4. AVATrade - Azụmahịa Crypto CFDs Na-agbasa agbasa
AvaTrade bụ ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe nke ọma nke gara n'ihu na-aga nke ọma n'ịzụ ahịa n'ịntanetị kemgbe ihe karịrị afọ iri. Akụkụ a ma ama nke AvaTrade bụ ọnụ ọgụgụ nke ikikere usoro iwu ọ na-ejide, na-ekwe ka ndị na-ere ahịa na-akwalite ahia na ikike dị iche iche. Nke a gụnyere UK, Australia, EU, Japan, South Africa, na ndị ọzọ.
Ọbụghị naanị na usoro nhazi, mana AvaTrade na-enwu gbaa mgbe ọ bịara n'ihe ahịa azụmaahịa dị na saịtị ahụ. Bụrụ ihe ngosipụta teknụzụ, eserese, ma ọ bụ ngwaọrụ njikwa ihe egwu - AvaTrade emechiela gị.
Ejikọtakwara ụlọ ọrụ ahụ na ọtụtụ nyiwe azụmaahịa - 'Zulutrade', na 'Duplitrade', yana ngwa mkpanaka ị nwere ike iji zụọ ahịa na njem.
Nkwụnye ego ntinye $ 100
E nyeghachi ego na ahịa niile
AvaTradeGO ngwa ngwa
Free nnweta ahịa demo naanị irè maka 21-ụbọchị
5. EuropeFX - Ebe Azụmahịa Crypto Na Nnukwu Ihe Mmụta
Agbanyeghị na ama ama ama maka azụmaahịa azụmaahịa, EuropeFX na-eme ka ọfụma nke ọma na brokering cryptocurrencies na ebuka, n'etiti akụ ndị ọzọ. Ihe ikpo okwu a bu nke CySEC nyere ikike, na-enye gi mmesi obi ike banyere onodu iwu ya.
Ga-ahụkwa njikọta na-enweghị ntụpọ na MT4, yana usoro azụmaahịa ha raara onwe ha nye EuroTrader 2.0. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ n'etiti ụdị akaụntụ dị iche iche iji zụọ ahịa na ikpo okwu. Isi akaụntụ ahụ chọrọ nkwụnye ego kacha nta nke $ 200.
I nwekwara ike ịhọrọ maka akaụntụ dị elu yana obere nkwụnye ego dị elu nke ga-eme ka ị nweta atụmatụ ndị pụrụ iche dịka akara ngosi, akwụkwọ akụkọ na ndị njikwa mmekọrịta.
Kwekọrọ n'Ozizi na MT4
Onye nchịkwa site na CySEC
Akaụntụ adịchaghị oke ọnụ
Nkebi nke 6: Mụta otu esi azụ ahịa Crypto Taa - Walkthrough
N'ime ntuziaka a zuru oke, anyị ekpuchila akụkụ niile nke azụmaahịa cryptocurrency. Ugbu a, ihe niile fọdụrụ maka gị bụ imepe akaụntụ azụmaahịa gị wee bido njem njem ahia gị.
Dị ka ihe niile, anyị ga-enye gị ihe atụ ebe a iji duzie gị na usoro ahụ. Anyị ga-eji eToro dị ka onye ndu anyị iji gosipụta otu ị ga - esi tinye azụmaahịa na - enweghị ọrụ mbu nke cryptocurrency.
Kwụpụ 1: Mepee Akaụntụ
Bido site na ịga na weebụsaịtị eToro wee pịa bọtịnụ 'Jikọọ Ugbu a'. Can nwere ike mejupụta ozi nkeonwe gị dịka aha, adreesị, email, ụbọchị ọmụmụ, na ihe ndị ọzọ iji mepụta akaụntụ gị.
Nzọụkwụ 2: Bulite NJ
Dị ka eToro na-agbaso iwu KYC, ị ga-ebugo ID nke gọọmentị nyere dịka paspọtụ gị ma ọ bụ ikike ịkwọ ụgbọala iji nyochaa njirimara gị.
Na eToro, ị nwere ike ịchekwa akụkụ a maka oge ọzọ. Kwesiri ịga ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ma ọ bụ tinye ego karịrị $ 2,250.
Kwụpụ 3: kwụnye ụfọdụ ego ahia
Site na ntọala akaụntụ gị, ị nwere ike ịga n'ihu itinye ego. Dị ka anyị kpuchie na mbụ, ị nwere ike ịhọrọ ịnyefe ego site na nnyefe ego, kaadị akwụmụgwọ / debit, ma ọ bụ site na e-wallets dị ka PayPal, Neteller, ma ọ bụ Skrill.
Kwụpụ 4: Bido ahia Crypto
Ugbu a, ị kwadebere nke ọma ịmalite ịzụ ahịa crypto. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ngwa ngwa na iwu - ị nwere ike ịgụ site na nnọkọ anyị na Iwu azụmaahịa Crypto ọzọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibu ụzọ nwalee mmiri ahụ, eToro na - enye gị ohere ịnweta akaụntụ ngosi nke na - abịa na ego akwụkwọ. Mgbe ị dịla njikere, ị nwere ike ịchọ ọnụọgụ ego ịchọrọ ịchọta, tinye ụdị usoro, wee pịa 'Mepee Azụ'.
Ọ bụ ya - ị tinyela ahịa azụmaahịa mbụ gị na eToro!
Mụta otu esi azụ ahịa Crypto - Mkpebi ahụ
Na anyị Mụta Otu esi ahia ahia Crypto, anyị ekpuchila ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị akụ dijitalụ a. Ka ọ dị ugbu a, ị kwesịrị inwe nghọta doro anya nke ihe cryptocurrencies bụ na ihe ị kwesịrị ịma tupu ịbanye n’ahịa ahụ.
Ọ bụ ihe dị mma mgbe niile ịga n'ihu na-akụziri onwe gị azụmaahịa, ọbụlagodi na ị nwetara ahụmịhe. Jide n'aka na ị ghọtara nke ọma na mmetụta nke ahịa nke cryptocurrency họrọ, na iji omume ngosi gosipụta omume gị tupu ị daba na ya.
Ikwubi - ikwesiri ichota onye na-ere ahia na ntanetị nke nwere ike ime ka ị na-azụ ahịa ahịa ngwa ngwa ma dị mma maka gị. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, ị nwere ike iso eToro na-aga mgbe niile - ebe ị nwere ike ịzụ ahịa crypto na ọrụ ọrụ efu.
Blueberry Markets - Guzosie ike ore ahia na Commission-Free Trades
500: 1 Leverage akụrụngwa dị
Gaa Leta ahịa Blueberry Ugbu a
Malite njem gị ruo iru ebumnuche ego gị niile ebe a.
A na-ewere crypto online dị ka nchekwa?
Ee, ọ dị mma ịzụ ahịa na ntanetị n'ịntanetị - nyere gị na ịhọrọ onye na-achịkwa njikwa.
Kedu ihe na-ekpebi ọnụahịa nke cryptocurrency?
Enwere ọtụtụ ihe na-eme ka ọnụahịa nke cryptocurrency pụta. Nke a gụnyere akụ na ụba ụwa, ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbanwe na usoro iwu, mmepe teknụzụ, na ndị ọzọ. N'ihi ya, ọ dị oké mkpa ka ị nọgide na-emelite banyere ihe ọhụrụ gbasara ahịa ahịa crypto.
Kedụ ka m ga - esi nweta uru site na ịzụ ahịa crypto?
Iji nweta uru na ahia crypto - ị ga-enwe ike ịkọwa n'ụzọ ziri ezi usoro ọnụahịa ọdịnihu nke akụ dijitalụ. You na-etinye iwu gị dị ka echiche gị si dị, ọ bụrụ na ahịa ahụ na-aga na ntụziaka ị buru amụma ya - ị ga-enweta uru.
O kwere omume irite uru ahia crypto?
Eeh. You nwere ike ịme ahịa uru crypto, mana ị ga-ebu ụzọ kwuo n'ụzọ ziri ezi nke ọnụ ahịa ego ahụ - ma debe usoro dị mkpa na onye na-ere ahịa na-achịkwa. eToro bụ n'efu 100%.
Nwere ike ịzụ ahịa crypto na US?
Eeh, ahịa cryptocurrency na-arụsi ọrụ ike na US. Anyị na-atụ aro ka ịchọta ịchọta onye na-achịkwa azụmaahịa dịka eToro ka ịmalite. Agbanyeghị, cheta na ị gaghị enwe ike ịnweta crypto CFDs - ebe amachibidoro ha iwu na mba ahụ. .
Emelitere ikpeazụ: February 19th, 2021